16 Okwu Jehova kwuru megide Beasha wee ruo Jihu+ nwa Hanenaị+ ntị, sị: 2 “Ebe ọ bụ na m si n’ájá+ kpọlite gị ka m wee mee gị onye ndú nke ndị m bụ́ Izrel,+ ma ị malitere na-eje ije n’ụzọ Jeroboam+ wee mee ka ndị m bụ́ Izrel mehie site n’iji mmehie ha na-akpasu m iwe,+ 3 lee, m na-ekpochapụ Beasha na ụlọ ya, m ga-emekwa ka ụlọ ya dịrị ka ụlọ Jeroboam nwa Nibat.+ 4 Onye Beasha ọ bụla nke nwụrụ n’obodo, nkịta ga-eri ya; onye ya ọ bụla nke nwụrụ n’ọhịa, anụ ufe nke eluigwe ga-eri ya.”+ 5 Ma ihe ndị ọzọ metụtara Beasha na ihe o mere na ike ọ kpara, ọ̀ bụ na e deghị ha n’akwụkwọ+ ihe ndị mere n’ụbọchị ndị eze Izrel? 6 N’ikpeazụ, Beasha sooro nna nna ya hà dinaa, e wee lie ya na Teza;+ Ila nwa ya wee malite ịchị n’ọnọdụ ya. 7 Site n’ọnụ Jihu nwa Hanenaị onye amụma, okwu Jehova bịakwasịrị Beasha na ụlọ ya,+ n’ihi ihe ọjọọ niile o mere n’anya Jehova site n’iji ihe aka ya mere+ kpasuo ya iwe,+ ka o wee dịrị ka ụlọ Jeroboam, nakwa n’ihi na o gburu ya.+ 8 N’afọ nke iri abụọ na isii nke ọchịchị Esa bụ́ eze Juda, Ila nwa Beasha ghọrọ eze Izrel wee chịa afọ abụọ na Teza. 9 Onye na-ejere ya ozi bụ́ Zimraị+ onyeisi ọkara ìgwè ụgbọ ịnyịnya ya wee malite ịgbara ya izu mgbe ọ nọ na Teza na-aṅụbiga mmanya ókè+ n’ụlọ Aza, bụ́ onye na-elekọta ezinụlọ+ ya na Teza. 10 Zimraị wee bata gbuo+ ya n’afọ nke iri abụọ na asaa nke ọchịchị Esa bụ́ eze Juda, o wee malite ịchị n’ọnọdụ ya. 11 O wee ruo na mgbe ọ malitere ịchị, ozugbo ọ nọkwasịrị n’ocheeze ya, o gburu ndị ezinụlọ Beasha niile. O kweghị ka onye ya ọ bụla nke bụ́ nwoke+ ma ọ bụ ndị ga-abọrọ ya ọbọ ọbara+ ma ọ bụ ndị enyi ya fọdụ. 12 Zimraị si otú a laa ụlọ Beasha dum n’iyi,+ dị ka Jehova kwuru+ megide Beasha site n’ọnụ Jihu onye amụma,+ 13 n’ihi mmehie niile nke Beasha na mmehie nke Ila+ nwa ya, bụ́ ndị ha mere, ndị ha jikwa mee ka Izrel mehie site n’iji arụsị ha na-abaghị n’ihe+ kpasuo Jehova bụ́ Chineke Izrel iwe. 14 Ma ihe ndị ọzọ metụtara Ila na ihe niile o mere, ọ̀ bụ na e deghị ha n’akwụkwọ+ ihe ndị mere n’ụbọchị ndị eze Izrel? 15 N’afọ nke iri abụọ na asaa nke ọchịchị Esa bụ́ eze Juda, Zimraị ghọrọ eze ma chịa ụbọchị asaa+ na Teza, ka ndị Izrel mara ụlọikwuu ibuso Gibetọn,+ bụ́ obodo ndị Filistia, agha. 16 Ka oge na-aga, ndị ahụ mara ụlọikwuu nụrụ ka e kwuru, sị: “Zimraị agbawo izu wee gbuo eze.” Ya mere, Izrel dum mere Ọmraị,+ bụ́ onyeisi ndị agha, eze Izrel n’ụbọchị ahụ n’ebe ha mara ụlọikwuu. 17 Ọmraị, ya na Izrel dum, wee si na Gibetọn gbagoro wee malite ịnọchibido+ Teza. 18 O wee ruo na ozugbo Zimraị hụrụ na e wegharawo obodo ahụ, ọ banyere n’ụlọ obibi dị elu nke ụlọ eze wee gbaa ụlọ eze ọkụ gbakọta onwe ya, o wee nwụọ,+ 19 n’ihi mmehie ya, bụ́ ndị o mere site n’ime ihe jọrọ njọ n’anya Jehova,+ site n’ije ije n’ụzọ Jeroboam nakwa ná mmehie ndị o mere site n’ime ka Izrel mehie.+ 20 Ma ihe ndị ọzọ metụtara Zimraị na izu ọjọọ ọ gbara, ọ̀ bụ na e deghị ha n’akwụkwọ+ ihe ndị mere n’ụbọchị ndị eze Izrel? 21 Ọ bụ mgbe ahụ ka ndị Izrel malitere ikewa onwe ha abụọ.+ E nwere otu akụkụ n’ime ha ghọrọ ndị na-eso Tibnaị nwa Gaịnat, iji mee ya eze, akụkụ nke ọzọ aghọọ ndị na-eso Ọmraị. 22 N’ikpeazụ, ndị na-eso Ọmraị meriri ndị na-eso Tibnaị nwa Gaịnat; nke mere na Tibnai nwụrụ, Ọmraị wee malite ịchị. 23 N’afọ nke iri atọ na otu nke ọchịchị Esa bụ́ eze Juda, Ọmraị ghọrọ eze Izrel wee chịa afọ iri na abụọ. Ọ chịrị afọ isii na Teza. 24 O wee zụrụ ugwu Sameria n’aka Shima ma kwụọ ya talent ọlaọcha abụọ, wee malite iwu obodo n’ugwu ahụ ma gụọ obodo ahụ o wuru Sameria,+ site n’aha Shima bụ́ onye nwe ugwu ahụ. 25 Ọmraị wee na-eme ihe jọrọ njọ n’anya Jehova ma mee ihe dị njọ karịa ndị niile bu ya ụzọ.+ 26 O wee na-eje ije n’ụzọ niile Jeroboam nwa Nibat+ jere nakwa ná mmehie ya nke o ji mee ka Izrel mehie site n’iji arụsị na-abaghị n’ihe+ kpasuo Jehova bụ́ Chineke Izrel iwe. 27 Ma ihe ndị ọzọ metụtara Ọmraị, ihe o mere na ike ọ kpara, ọ̀ bụ na e deghị ha n’akwụkwọ+ ihe ndị mere n’ụbọchị ndị eze Izrel? 28 N’ikpeazụ, Ọmraị sooro nna nna ya hà dinaa, e wee lie ya na Sameria; Ehab+ nwa ya wee malite ịchị n’ọnọdụ ya. 29 Ma Ehab nwa Ọmraị ghọrọ eze Izrel n’afọ nke iri atọ na asatọ nke ọchịchị Esa bụ́ eze Juda; Ehab nwa Ọmraị wee na-achị Izrel afọ iri abụọ na abụọ na Sameria.+ 30 Ehab nwa Ọmraị wee mee ihe jọrọ njọ n’anya Jehova karịa ndị niile bu ya ụzọ.+ 31 O wee ruo na, dị ka à ga-asị na ije ije ná mmehie Jeroboam+ nwa Nibat bụ ntakịrị+ ihe n’anya ya, ọ lụụrụ+ Jezibel+ bụ́ ada Etbel eze ndị Saịdọn+ ma malite ife Bel,+ na-akpọkwara ya isiala. 32 O wukwaara Bel ebe ịchụàjà n’ụlọ+ Bel bụ́ nke o wuru na Sameria. 33 Ehab wee mee ogwe osisi dị nsọ;+ Ehab wee mekwuo ihe iji kpasuo Jehova bụ́ Chineke Izrel iwe+ karịa ndị eze niile nke Izrel bụ́ ndị bu ya ụzọ. 34 N’ụbọchị ya, Hayel, bụ́ onye Betel, wuru Jeriko. Ịtọ ntọala ya riri isi Abaịram bụ́ ọkpara ya, itinye ibo ụzọ ya riri isi Sigọb bụ́ ọdụdụ nwa ya, dị ka Jehova kwuru site n’ọnụ Jọshụa nwa Nọn.+